FAMPAHALALANA MOMBA NY ALIKA DOXLE ALIKA SY SARY - ALIKA
Fampahalalana momba ny alika doxle alika sy sary
Alika mifangaro Beagle / Dachshund mifangaro
'Ity dia pataloha Zoe. 2 ½ taona izy amin'ity sary ity ary avy any Quebec, Canada, toerana nananganako azy. Mihevitra izy fa mpanjakavavitr'izao rehetra izao ary izy no lolo lolo ara-tsosialy. Rehefa tsy mitolona amin'ny olombelona na alika hafa izy, dia tiany ny manimbolo isaky ny santimetatra toradroa eran'izao tontolo izao, ary mibontsina amin'ny sifotra sy saka. Tena mianatra haingana tokoa izy ary hanao zavatra amin'ny fitsaboana. Manakana ahy eny an-dalambe isan'andro ny olona ary milaza amiko fa tsara tarehy izy. Tao Montreal no nakako ity sary ity tany amin'ny toeram-pilalaovana doggie tiany indrindra. '
alika beagle mainty sy tan
Ny Doxle dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Beagle ary ny Dachshund . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Drafitra mpamorona endrika = Beaschund na Doxie
Bunny the Beagle / Dachshund mifangaro alika (Doxle) amin'ny faha-13 volana
Mason the Beagle / Dachshund mix dog (Doxle) amin'ny 2 taona dia nianatra nianika hazo tamin'ny tongony fohy!
Mason the Beagle / Dachshund mifangaro alika (Doxle) amin'ny 8 volana
Shelby ilay dapple Dachshund / Beagle mix (Doxle) 22 volana
Alika mifangaro Buddy the Beagle / Dachshund (Doxle) amin'ny 6 taona '—Buddy nilaozana teo akaikin'ny trano fonenanay. Tiany ny miforitra ary mahita fomba mamorona mihamitombo hamongorana ny fitoeran-tsakafo akaiky indrindra. '
Bernard (Bernie) ny alika kely Doxle 15 herinandro— ' Bernie dia Doxle natsangana avy any Atlanta, saingy mipetraka any Jersey miaraka amin'ny sakaizako ary izaho Andriamatoa Popular dia tsy mpinamana fotsiny alika hafa ary ny olona dia mitia ary tia ny ety ivelany. 'Sit' sy 'paw' dia vao fiandohan'ity lil genius ity. Manantena aho fa mankafy! '
Bernard (Bernie) ny alika kely Doxle amin'ny 15 herinandro
Alika mifangaro ao amin'ny Lady the Beagle / Dachshund (Doxle) aseho eto amin'ny 4 ½ taona
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Doxle
Sary doxle 1
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Bullweiler amerikana
Fampahalalana sy sary miteraka alika Austi-Pap
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Shorgi
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Wolador
Fampahalalana sy sary momba ny alika amerikana amerikana
husky sy pitbull Mix alika kely
husky fotsy sy fotsy miaraka amin'ny maso manga
Boston terrier sy Chihuahua Mix
sary ny alika hiteraka